Uvakashela kanjani iWhite House nePentagon | Izindaba Zokuhamba
Uvakashela kanjani iWhite House nePentagon
UMariela Carril | | Yini ongayibona, Washington
United States yizwe elikhulu kakhulu kodwa ngenxa yesinema nethelevishini kunezindawo ezithile ezihehayo izivakashi ezifuna njalo ukuzivakashela. Singenza uhlu olukhulu, kepha kubonakala kimi ukuthi amasayithi amabili asesihlokweni sendatshana yanamuhla aphakathi kweTop Five, akunjalo?
La Casa Blanca Kuyisihlalo samandla aseMelika, okungenani yileyondlela iHollywood ne I-Pentagon kufana nendawo engaqondakali yezinqumo ezibalulekile zamasosha. Ngabe uya e-United States? Ngakho-ke lapha ngikushiya konke odinga ukukwazi lapho wenza lezi zivakashi ezimbili ezinhle.
1 Vakashela i-White House
2 Vakashela iPentagon
Vakashela i-White House
I-White House Yindawo yokuhlala esemthethweni kaMongameli wase-United States ngesikhathi sakhe, kepha labo abavakashela iWashington DC bangavakashela ukuyofunda umlando namasiko aseMelika. Kuze kube yisikhathi esifushane kakhulu esedlule, ubungeke uthathe izithombe, into ekhathazayo, yize ilusizo, kodwa kusukela ngonyaka ophelile uMongameli wokuqala uMichelle Obama ogunyaze izithombe e-White House Tour edumile.
Vele, ubuchwepheshe obusha bufake ingcindezi enkulu kulolu daba, kepha baphoqa nezinyathelo zokuphepha ezeqisayo. Ngakho-ke kulezi zinsuku izivakashi ezithatha izithombe ngaphakathi endlini ingalayishwa ekuxhumaneni nomphakathi nge-hashtag i-WhiteHouseTour. Ngakho-ke ungabhalisela kanjani ukuvakasha okuqondisiwe kwe-White House? Okokuqala kufanele wenze ukubhuka futhi unezinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba ukwenze futhi kungabi ngaphansi kwamasonto amathathu.
Isicelo sokuvakasha Kufanele ukwenze ngokusebenzisa inxusa lezwe lakini eWashington. Kufanele ushiye imininingwane yokuxhumana, izinsuku kanye nenombolo yabantu abakha iqembu lakho. Uhambo oluqondiswayo lwenzeka kusukela ngo-7: 30 ekuseni kuya ku-11: 30 ekuseni, ngoLwesibili kuya ngoLwesine, nangoLwesihlanu kuya kuMgqibelo phakathi kuka-7: 30 ekuseni no-1: 30 ntambama.
Kukhona izinto ongeke ukwazi ukuzifaka eWhite House: amakhamera, amakhamera wevidiyo, ukudla, iziphuzo, osikilidi noma amapayipi, uketshezi, ijeli, okokugcoba, izikhali, imimese noma izinto ezibukhali, ojosaka, amapotimende, izikhwama zemali, njll. Zonke lezi zinto ungazishiya emahhotela aseduze, kumalokhethi abiza kuwo imali encane kodwa uma ususukile usuphethe konke okuseduze. IWhite House ayinawo amakhabetheYebo amahhotela kanye ne-Union Station eseduze. Yebo, ungangena nokhiye, izikhwama zemali, izingcingo eziphathwayo nezambulela.
Njengoba ngishilo ngenhla, kusuka ngonyaka odlule ungathatha izithombe ngamakhamera ahlangene namafoni ahlakaniphile. Akukho ukuqoshwa kwevidiyo futhi akukho zinti ze-selfie ezivunyelwe. Uhambo luhlala isigamu sehora uma usudlulise izinyathelo zokuphepha. Uzodlula amakamelo amaningana kodwa ngeke ungene endaweni yokuhlala lapho kuhlala khona umongameli nomndeni wakhe, noma igumbi elidumile le-Oval kanye ne-West Wing. Yebo, kukhona abasebenzeli be-Secret Service yonke indawo futhi bagunyaziwe ukuphendula imibuzo ukuze ukwazi ukuxhumana nabo.
Ungafika kanjani e-White House: Isiteshi esiseduzane nomnyango wokuvakasha okuqondisiwe yiMetro Center (13th Street exit). Uma ufika phezulu kwezitebhisi ezizihambelayo, thatha umgwaqo 13th Street South, jikela ngakwesokudla ku-E Street bese uqonde ku-15th Street. Uma ungabhaliselanga ukuvakasha futhi uzozihambela, kufanele ufike ngaphambi kwesikhathi. Kusemgwaqweni u-15 kulayini.
Isikhungo Sokuvakasha seWhite House sinamabhulokhi ambalwa ukusuka e-White House futhi kufanele ukuvakashelwa. Ibuyisiwe, umbukiso wayo omusha wakhiwe ngezinto ezingaba ngu-90 ezinikezwe yiWhite House Historical Association futhi eziningi zazo azikaze zikhonjiswe. Kukhona ideski likaFranklin D. Roosvelt, ngokwesibonelo, futhi ividiyo ethakazelisa kakhulu yemizuzu eyi-14 nayo iboniswa ukuthi kungakuhle ukuthi uyibuke ngaphambi kohambo olufanayo.
Konke ukuvakasha kuhlala ihora nesigamu. Leli sayithi livulwa nsuku zonke ngaphandle kukaKhisimusi, i-Thanksgiving neminyaka emisha kusuka ngo-7: 30 ekuseni kuya ku-4 ntambama futhi kungenwa mahhalauku. Unesitolo sezipho futhi kunomfanekiso wedeski likamongameli egumbini le-Oval lapho ungathatha khona isithombe. Ekugcineni, uma unohambo oluhlelwe maduze nje, ngizokutshela ukuthi ngoDisemba 1 amalambu esihlahla seKhisimusi saseWhite House azovulwa ngokusemthethweni.
Ukuvakasha kweWhite House kukhululekile.
IPentagon itholakala ngaphandle nje kweWashington DC, e-Arlington. Kumayelana Amabhalekisi uGJikelele woMnyango Wezokuvikela wase-United States y Kuvulekele ukuvakasha okuqondisiwe.
Lezi zivakashi eziqondisiwe angabhukwa kufika ezinsukwini eziyi-14 ngaphambi kohambo futhi kungabi ngaphezu kwezinsuku ezingama-90 ngaphambi kwesikhathi. Zenzeka kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngaphandle kwamaholide, phakathi kuka-9 ekuseni no-3 ntambama. Amaqembu agcwalisa ngokushesha okukhulu ngakho-ke uma uthanda umbono wokwenza ukuvakasha kufanele ubhukhe kusenesikhathi. Isicelo sabokufika kumele senziwe ngenxusa.
Uhambo oluqondiswayo luhlala ihora elilodwa futhi lumboza cishe amakhilomitha amabili ngaphakathi kwalesi sakhiwo esinelukuluku elingelinye elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Uzocaciselwa ngomlando wamagatsha amane amasosha aseMelika ahlukaniswe kuwo futhi uzokwazi nokuvakashela isikhumbuzo sangaphakathi esenziwa ngemuva kukaSepthemba 11, 2001. Kunendlu yesonto neHholo lamaQhawe elinamagama labafileyo.
Akukho kupaka epentagon ngakho kufanele ufike ngezithuthi zomphakathi. Isiteshi esiseduze kakhulu yiPentagon kulayini we-orange metro, kepha uma unemoto ungayishiya ipakwe ePentagon City Mall bese uhamba imizuzu emihlanu eyihlukanisa nebhilidi lezempi ngomhubhe wabahamba ngezinyawo. Ukungena kwezivakashi kwenziwa ngewindi lePentagon Tour eliseduze nomnyango ongaphansi komhlaba.
Kufanele uqinisekise noma ngena okungenani ehoreni elilodwa ngaphambi kohambo kuhlelwe ngoba kuzodingeka uphase izinyathelo zokuphepha bese wethula amaphepha okuqinisekisa ukubhuka kanye namapasipoti. Izikhwama ezinkulu noma ojosaka noma amaselula, amakhamera noma amadivayisi akuvumelekile ngogesi kolunye uhlobo. Ngemuva kohambo lwangaphakathi, ngincoma ukuthi uhambe uzungeze, okuyilapho iSikhumbuzo se-11/XNUMX, cishe imizuzu eyishumi yokuhamba ulandela izimpawu.
Uhambo olulodwa, idolobha elilodwa, ukuvakashelwa okubili okuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Washington » Uvakashela kanjani iWhite House nePentagon
Yini ongayibona edolobheni lase-Athene